Ma rabtaa inaad abuurto dakhli bille ah oo fiican, ama xitaa ka dhig shaqo waqti-buuxa ah?
Fikradayda had iyo jeer sameynta tababarka suuq geynta websaydhka fudud ee xoogga leh, waxaan go aansaday inaan muujiyo a oo dhan hal nidaam waayo, lacag ku kasbato Daaburka Daabacaadda, sameyso nashqadahaaga tayada leh isla markaana dhaqso, u iibi oo si toos ah ugu hel komishankaaga komishankaaga.
Waxaad ka heli doontaa tababarkan cusub:
Le daabac qaabka ganacsiga dhoofinta.
Abuur ilo dakhli oo joogto ah, marka shaqada la dhammeeyo waxaad heli doontaa dakhligaaga si otomaatig ah.
Raadi waxa ay yihiin suuqyada ugu habboon himilooyinkaaga.
Baro inaad hel fikradaha naqshadeynta in la iibiyo waxa la doonayo xilligan.
Sirta ku jirta abuuraan qaabab fudud, garaaf ahaan qurux badan oo soo jiidasho leh iyada oo aan wax aqoon ah u lahayn tafatirka sawirada.
Wadada loo maro kordhi aragtida alaabtaada adoon xayeysiin.
Qaabka loo sameeyo qarxin iibkaaga la suuqgeynta shabakadda.
Lacag uga hel khadka tooska ah ee 0 €: Daabacaadda Diritaanka Diisambar 12, 2020Tranquillus
horeDhoofinta: 12 Talaabooyin Muhiim u ah Guusha E-Ganacsiga
socdaQor qeexitaan wax ku ool ah!